स्पा - स्वास्थ्य - प्रकाशितः आश्विन ४, २०७५ - नारी
आश्विन ४, २०७५
स्पा भनेको के हो ?
यो ल्याटिन शब्दको अर्थ ‘ट्रिटमेन्ट थु्र वाटर–अर्थात्–पानीको माध्यमद्वारा गरिने उपचार पद्धति हो । सफा एवं प्राकृतिक वातावरणमा मीठो धुन सुन्दै तथा सुगन्धित वासनासँगै लिइने सेवा नै स्पा हो ।
यसभित्र के–के पर्छन् ?
स्पाअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइन्छ । विभिन्न किसिमका मसाज, शिरोधारा, स्टिम, साउना, ज्याकुजी, मेनिक्योर, पेडिक्योर, विविध प्रकारका थेरापी, अकुपञ्चर, अकुप्रेसर आदि थुप्रै कुरा यसअन्तर्गत आउँछन् ।
स्पाका फाइदा के–कस्ता छन् ?
अमेरिकातिर यसलाई वैकल्पिक स्वास्थ्यका रूपमा लिएर सरकारद्वारा नै यसका लागि इन्स्योरेन्सको व्यवस्था हुँदो रहेछ । यद्यपि हामी अहिलेसम्म यसको प्रमोसनकै क्रममा छौं । यो हेल्थ प्रमोसन प्रिभेन्सनको मुख्य पद्धति हो । यसले रोग लाग्नबाट जोगाउनुका साथै लागेको रोग निको पार्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसका अतिरिक्त स्वस्थ जीवनचर्यामा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आजका व्यस्त मानिसलाई स्वच्छ तथा तरोताजा रहन सहयोग गर्छ ।
- प्रबन्ध–निर्देशक ट्रयांक्युलिटी स्पा
भाद्र ३१, २०७५ - स्पा तथा नेचुरोपेथी उपचार
असार ७, २०७५ - ब्युटीफिक स्लिमिङ एण्ड स्पा
जेष्ठ ११, २०७५ - बडी सेप टोन गरी सेपअप बडी
माघ २३, २०७४ - ब्युटीफिक स्लिमिङ एण्ड स्पा
आश्विन २२, २०७४ - स्पाको आवश्यकता
फाल्गुन २०, २०७३ - स्पा ट्रिटमेन्टले मानसिक एवं शारीरिक रूपमा सुन्दर बनाउँछ
थप केही स्वास्थ्यबाट
नेपालमा डाउन सिन्ड्रोम दिवस जेष्ठ ६, २०७६
४० वर्षे उमेरमा स्वस्थ रहन वैशाख २९, २०७६
स्वस्थ खानाबाट पनि एसिडिटी ? वैशाख २७, २०७६
संकेतबाट थाहा पाउन सकिन्छ स्वास्थ्य वैशाख २६, २०७६
स्वस्थ रहने सूत्र वैशाख २३, २०७६
स्वास्थ्यका सन्दर्भमा वार्षिक संकल्प वैशाख २२, २०७६